Ndị na-emepụta ngwaahịa - Productslọ ọrụ ngwaahịa nke China, Ndị na - eweta ya - Nkebi nke 3
Akpa azu umu akwukwo ulo akwukwo TIGERNU nke nwere komputa laptọọpụ
Ikike: Themụaka akpa azụ bụ 29 * 14 * 44cm (L * W * H) .Ọ nwere otu laptọọpụ padded dị iche iche n'okpuru eriri ubu dabara na laptọọpụ 15.6 nke anụ ọhịa. Otu nnukwu nnukwu ogige nwere ọtụtụ akpa na-enye ohere zuru oke maka gị mkpa kwa ubochi dika akwa, akwukwo, obere akpa na ndi ozo. Ogwe nke ọzọ dị n’ihu nwere ike ịhazi obere obere ihe gị niile. Front obere mkpọchi uwe n'akpa uwe bụ maka mfe nnweta ugboro ugboro ji ihe. Akpa abụọ n’akụkụ dị mma maka karama mmiri gị na nche anwụ.
Ihe mara mma: A na-eji paịlị USB ejiri paịlị na ọkọlọtọ na-eguzogide ọgwụ, nke na-adịgide adịgide na mmekọrịta enyi na enyi. The waterproof ụzọ abụọ emeghe mkpọchi mkpọchi nke isi ogige enye abụọ mgbochi na-ezu ohi nchedo
TIGERNU USB na-akwụ ụgwọ laptọọpụ laptọọpụ
Kachapu USB USB: Akpa akpa USB dị na mpụga na eriri dị mma iji kwụọ ụgwọ ekwentị / mbadamba / ngwaọrụ ndị ọzọ site na iji akụ ike gị n'ime. Kemwepu USB cable dị mma maka nhicha azu paaki, agaghị enweta USB rere ure.
Ihe mara mma: A na-eji paịlị USB ejiri paịlị na ntanetị na-eguzogide ọgwụ polyester, nke na-adịgide adịgide ma nwee mmekọrịta enyi na enyi. The waterproof ụzọ abụọ emeghe mkpọchi mkpọchi nke isi ogige enye abụọ mgbochi na-ezu ohi nchedo
Ọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka nwa akwụkwọ ụlọ akwụkwọ, ọrụ, njem, azụmaahịa yana iji ụbọchị.
TIGERNU kpochapụwo imewe laptọọpụ azu paaki
Ikike: A kpochapụwo azu paaki bụ a dị mfe version of T-B3032. Ọ nwekwara nha abụọ, otu nha bụ 29 * 14 * 44cm (L * W * H), dabara maka laptọọpụ ruo 15.6 ″, nke ọzọ bụ 31 * 17 * 48cm (L * W * H), dabara maka laptọọpụ ruo 17 T .Ihe abuo abuo na akpa uzo abuo na-enye ohere zuru oke maka mkpa gi kwa ubochi ma debe akpa azu gi nke oma. Otu akpa zoro mgbochi mgbochi ohi n'akpa uwe bụ zuru okè n'ihi na ekwentị gị na ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa.
Ihe: Nke a na laptọọpụ azu paaki ihe bụ splashproof & ọkọ na-eguzogide ọgwụ naịlọn, inogide, ogologo na-adịgide adịgide na eco-friendly.The isi mkpọchi bụ TIGERNU patented abụọ oyi akwa lockable mkpọchi uwe, sturdy, ezigbo iji na ndị ọzọ ala n'ihi na ihe onwunwe gị.
Atụmatụ: Akpa azụ a bụ ikike dị ukwuu, dabara maka ebumnuche ọ bụla.Enyinye akpị nwere njiri ike mesiri ike na otu ubu eriri nwere ike idozi. gị azu paaki na trolley nke akpa gị mfe.
Na njirimara dị mma ndị ọkachamara, njirimara dị mma, yana nkọwa nchekwa, ikike akpa akwa Tigernu buru ibu otu ị si arụ ọrụ.
Ikike: A kpochapụwo azu paaki na-kwalite version si Tigernu T-B3032. Ọ nwekwara nha abụọ, otu nha bụ 29 * 14 * 44cm (L * W * H), dabara maka laptọọpụ ruo 15.6 ″, nke ọzọ bụ 31 * 17 * 48cm (L * W * H), dabara maka laptọọpụ ruo 17 ″. Otu akụkụ laptọọpụ dị iche n'okpuru eriri ubu dị mma. Akụkụ abụọ dị mkpa na obere akpa abụọ na-enye ohere zuru oke maka mkpa gị kwa ụbọchị ma debe akpa gị mma na nke ọma. Akụkụ abụọ n'akụkụ gị nke ọma maka nche anwụ na karama mmiri. Otu akpa zoro mgbochi mgbochi ohi n'akpa uwe bụ zuru okè n'ihi na ekwentị gị na ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa.
Atụmatụ: Akpa azụ a bụ ikike dị ukwuu, dabara maka ebumnuche ọ bụla.Ee azu paaki nwere ihe ejiri mesikwuru ya na otu eriri ubu a na-agbanwe agbanwe. .
TIGERNU kpochapụwo imewe mgbochi ohi paaki
Ike: Akpa akpa bụ mgbochi ohi imewe na a size nke 29 * 14 * 45cm. The isi ogige na ọtụtụ akpa na a na-ewu na-padded laptọọpụ oghere dabara ruo 15,6 ″ laptọọpụ. uwe, ụlọ akụ ike, ekweisi na ihe ndị ọzọ. The n'ihu ogige na otutu divider akpa na-enyere aka ịhazi gị obere nwere, itienna, obere akpa, ekwentị, Gịnị wdg Otu akụkụ mkpọchi uwe n'akpa uwe na otu akụkụ ntupu n'akpa uwe; azụ mgbochi ohi n'akpa uwe maka ihe ndị dị mkpa
Safety atụmatụ: The ejiji azu paaki ka nke splashproof & ọkọ na-eguzogide ọgwụ naịlọn, inogide na ogologo na-adịgide adịgide. Ugboro abụọ nke anọ na-eme ka ezé ezé ezé na-enye ọnụ na mkpọchi TSA na-enye nchebe ọzọ maka njem gị na ndụ gị kwa ụbọchị.
Atụmatụ: A na-ejide eriri akpa akwa dabara adaba maka ịkwado akpa laptọọpụ na akpa gị, na-eme njem gị ma na-eme njem ọ bụla ga-adaba adaba ebe ọ bụla ị na-aga. .
Akpa akpa a bụ kpochapụwo imewe mgbochi ohi paaki, adabara ndị ikom, ndị inyom, ụmụ akwụkwọ maka nzube ọ bụla. O zuru oke maka ndụ kwa ụbọchị, azụmahịa, ọrụ, ịzụ ahịa, ịma ụlọikwuu, picnic, ụlọ akwụkwọ, akpaazụ njem.
TIGERNU kpochapụwo imewe nnukwu ikike waterproof laptọọpụ paaki
Ike: Omuma paaki kpochapụwo 35 * 20 * 54cm (L * W * H), dabara maka laptọọpụ ruo 19 The .Ọdụ laptọọpụ dị mma nke ọma ma na-agụ akwụkwọ ma na-agbanwe agbanwe. Isi ngalaba abụọ na akpa abụọ n'ihu na-enye ohere maka mmadụ niile mkpa gị kwa ụbọchị ma debe akpa gị mma n'anya ma dị mma. Akụkụ abụọ dị mma maka nche anwụ na karama mmiri. Otu akpa zoro ezo mgbochi izu ohi zuru oke maka ekwentị gị na ihe ndị ọzọ dị oké ọnụ ahịa. Ọ bụ nnukwu akpa akpa, nwee ike ịpụ ogologo njem ma ọ bụ akpa a haziri ahazi na ọtụtụ akpa, dị mfe ịchọta ihe ịchọrọ.
Ihe: Nke a na laptọọpụ azu paaki ihe bụ splashproof & ọkọ na-eguzogide ọgwụ naịlọn, inogide, ogologo na-adịgide adịgide na eco-friendly.The isi mkpọchi bụ TIGERNU patented abụọ oyi akwa lockable mkpọchi uwe, strudy, ezigbo iji na ndị ọzọ ala n'ihi na gị ihe onwunwe.
Atụmatụ: Uwe laptọọpụ nwere ike idozi dịka ihe ị chọrọ si dị, akpaazụ a nwere ihe ejiri mesikwuru ya ike na otu ubu eriri.Ergonomics na S-shape padding shoulder straps belata mgbatị na ubu.
Akpa akpa bụ TIGERNU kpochapụwo imewe akpa. Nnukwu ikike ya na njirimara a haziri ahazi na-eme ka ọ dabara maka ebumnuche ọ bụla, azụmaahịa, njem, ọrụ, hiking, camping, picnic, school.Ọ bụkwa ezigbo nhọrọ onyinye maka oge ọ bụla.
<< <Gara aga 123456 Osote> >> Peeji nke 3/12